အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူ ဝေါဟာရများ (Synonyms) - Myanmar Network
အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူ ဝေါဟာရများ (Synonyms)
Posted by Language Republic on August 8, 2012 at 10:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စကားပြောတဲ့အခါ၊ စာဖတ်တဲ့အခါ၊ စာရေးတဲ့အခါ စကားပရိယာယ်ဆိုတာ မရှိဘဲ တစ်ခါလာလည်း မဲပြာ ပုဆိုး ဆိုသလို ဒီဝေါဟာရတွေကိုချည်း ထပ်ခါတလဲလဲ သုံးနေရမယ်ဆိုရင် ဘာသာစကားဆိုတာ ဘယ်လို နေမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လောကကြီးမှာ ရှိရှိသမျှ (လူ၊ နေရာ၊ အရာဝတ္ထု) အတွက် ဝေါဟာရ တစ်လုံးစီသာ သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် လောကကြီးဟာ ပျင်းစရာ ကောင်းမှာဘဲ။
စကားအသုံးအနှုန်းမှာ အဓိပ္ပာယ် ကြွယ်ဝဖို့နဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းစေဖို့ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းကို ပြောင်းလဲပေးရတယ်။ (အလွန်အကျွံတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။)
ဒီနေရာမှာ အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူ ဝေါဟာရတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်လာတယ်။
အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူ ဝေါဟာရတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ synonym လို့ ခေါ်တယ်။ synonym ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ “syn” နဲ့ “onym” ဂရိစာလုံး ၂လုံးပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ “syn” က အတူတကွလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်၊ “onym” ကတော့ အမည်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ Synonym တွေက တစ်ခုတည်းကို အမည်အများပေးခြင်း လို့ ဆိုလိုတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် synonym တွေဟာ အဓိပ္ပာယ်ထပ်တူ တူတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အတော် ဆင်တူတဲ့ စကားလုံး စကားစုတွေ ဖြစ်တယ်။
Beautiful - Pretty (လှပသော - ချောမောသော)
Teenager - Adolescent (ဆယ်ကျော်သက် - အရွယ်ရောက်စလူငယ်)
Baby - Toddler (မွေးစကလေး-လမ်းလျှောက်တတ်စကလေး)
Mother - Mommy (အမေ-မာမီ)
Synonym တွေဟာ ဘယ် part of speech ၀ါစင်္ဂ မဆို ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ဥပမာ noun နာမ်၊ verb ကြိယာ၊ adjective နာမ၀ိသေသန၊ adverb ကြိယာဝိသေသန ဒါမှမဟုတ် preposition ရှေ့ဆက်စကားလုံး တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။) Part of speech ၀ါစင်္ဂချင်းတော့ တူရတယ်။
Amazing, awesome, incredible, astonishing (adjectives)
Car, auto, automobile, motorcar (nouns)
Participate, take part, join (verbs)
Quickly, fast, promptly (adverbs)
On, upon (prepositions)
စကားလုံးတစ်လုံးကို အဓိပ္ပာယ်တူ synonym နဲ့ အစားထိုးမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အခြေအနေ မှာ ၀ါကျအဓိပ္ပာယ် ပြောင်းလဲမသွားအောင် သတိပြုရမယ်။ Synonym ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ စကားလုံးတွေရဲ့ ဘယ်အဓိပ္ပာယ်ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုထားတယ် ဆိုတာနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေတတ်တယ်။
This is my senior year at University.
အခုနှစ်က ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်ပါ။
ဒီဝါကျမှာ Senior ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို elder ဒါမှမဟုတ် older ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အစားထိုးလို့ မရဘူး။ အဲဒီစကားလုံးတွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်ရင် ဒီဝါကျမှာ သုံးထားတှဲ့Senior ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ပျောက်သွားတယ်။ ၀ါကျလည်း ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ် မရောက်တော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် senior ဆိုတာ စတုတ္ထနှစ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို စွဲပြီး နောက်ဆုံးနှစ် last လို့ အစားထိုးနိုင်တယ်။ senior အစား last ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ မူရင်းဝါကျရဲ့ အဓိပ္ပာယ် မပျက်ဘူး။
စကားပြောကောင်းသူ၊ စာရေးကောင်းသူတွေဟာ ဝေါဟာရကို အလဲအလှယ် သုံးတတ်ကြတယ်။ စာဖတ်သူလည်း ဝေါဟာရတွေ အလဲအလှယ် သုံးတတ်အောင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ အဓိပ္ပာယ်ဆက်စပ်မှုကို ပြတဲ့ thesaurus ဝေါဟာရဘဏ် စာအုပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Thesaurus မှာ အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အဓိပ္ပာယ် ဆက်စပ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေကို စာရင်းပြုလုပ်ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ရေးနေတဲ့ စာသားထဲမှာ စကားပရိယာယ် ကြွယ်စေဖို့ သင့်တော်ရာ ဝေါဟာရအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
စကားပွောတဲ့အခါ၊ စာဖတျတဲ့အခါ၊ စာရေးတဲ့အခါ စကားပရိယာယျဆိုတာ မရှိဘဲ တဈခါလာလညျး မဲပွာ ပုဆိုး ဆိုသလို ဒီဝေါဟာရတှကေိုခညျြး ထပျခါတလဲလဲ သုံးနရေမယျဆိုရငျ ဘာသာစကားဆိုတာ ဘယျလို နမေလဲ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ လောကကွီးမှာ ရှိရှိသမြှ (လူ၊ နရော၊ အရာဝတ်ထု) အတှကျ ဝေါဟာရ တဈလုံးစီသာ သတျမှတျထားမယျဆိုရငျ လောကကွီးဟာ ပငျြးစရာ ကောငျးမှာဘဲ။
စကားအသုံးအနှုနျးမှာ အဓိပ်ပာယျ ကွှယျဝဖို့နဲ့ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးစဖေို့ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုနျးကို ပွောငျးလဲပေးရတယျ။ (အလှနျအကြှံတော့ မဟုတျဘူးပေါ့။)
ဒီနရောမှာ အဓိပ်ပာယျဆငျတူ ဝေါဟာရတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍ ဖွဈလာတယျ။
အဓိပ်ပာယျဆငျတူ ဝေါဟာရတှကေို အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ synonym လို့ ချေါတယျ။ synonym ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ “syn” နဲ့ “onym” ဂရိစာလုံး ၂လုံးပေါငျးစပျထားတာဖွဈတယျ။ “syn” က အတူတကှလို့ အဓိပ်ပာယျရတယျ၊ “onym” ကတော့ အမညျလို့ အဓိပ်ပာယျရတယျ။ Synonym တှကေ တဈခုတညျးကို အမညျအမြားပေးခွငျး လို့ ဆိုလိုတယျ။
တဈနညျးအားဖွငျ့ synonym တှဟော အဓိပ်ပာယျထပျတူ တူတဲ့ ဒါမှမဟုတျ အတျော ဆငျတူတဲ့ စကားလုံး စကားစုတှေ ဖွဈတယျ။
Beautiful - Pretty (လှပသော - ခြောမောသော)
Teenager - Adolescent (ဆယျကြျောသကျ - အရှယျရောကျစလူငယျ)
Baby - Toddler (မှေးစကလေး-လမျးလြှောကျတတျစကလေး)
Mother - Mommy (အမေ-မာမီ)
Synonym တှဟော ဘယျ part of speech ၀ါစင်ျဂ မဆို ဖွဈနိုငျတယျ။ (ဥပမာ noun နာမျ၊ verb ကွိယာ၊ adjective နာမဝိသသေန၊ adverb ကွိယာဝိသသေန ဒါမှမဟုတျ preposition ရှဆေ့ကျစကားလုံး တှေ ဖွဈနိုငျတယျ။) Part of speech ၀ါစင်ျဂခငျြးတော့ တူရတယျ။
စကားလုံးတဈလုံးကို အဓိပ်ပာယျတူ synonym နဲ့ အစားထိုးမယျဆိုရငျ သကျဆိုငျရာ ဆကျစပျအခွအေနေ မှာ ၀ါကအြဓိပ်ပာယျ ပွောငျးလဲမသှားအောငျ သတိပွုရမယျ။ Synonym ဖွဈမဖွဈဆိုတာ စကားလုံးတှရေဲ့ ဘယျအဓိပ်ပာယျကို ရှေးခယျြအသုံးပွုထားတယျ ဆိုတာနဲ့လညျး သကျဆိုငျနတေတျတယျ။
အခုနှဈက ကြှနျတျော တက်ကသိုလျ နောကျဆုံးနှဈပါ။
ဒီဝါကမြှာ Senior ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို elder ဒါမှမဟုတျ older ဆိုတဲ့ စကားလုံးတှနေဲ့ အစားထိုးလို့ မရဘူး။ အဲဒီစကားလုံးတှနေဲ့ အစားထိုးလိုကျရငျ ဒီဝါကမြှာ သုံးထားတှဲ့Senior ရဲ့ အဓိပ်ပာယျ ပြောကျသှားတယျ။ ၀ါကလြညျး ဆိုလိုရငျး အဓိပ်ပာယျ မရောကျတော့ဘူး။
ဒါပမေယျ့ senior ဆိုတာ စတုတ်ထနှဈဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျကို စှဲပွီး နောကျဆုံးနှဈ last လို့ အစားထိုးနိုငျတယျ။ senior အစား last ကို သုံးမယျဆိုရငျတော့ မူရငျးဝါကရြဲ့ အဓိပ်ပာယျ မပကျြဘူး။
စကားပွောကောငျးသူ၊ စာရေးကောငျးသူတှဟော ဝေါဟာရကို အလဲအလှယျ သုံးတတျကွတယျ။ စာဖတျသူလညျး ဝေါဟာရတှေ အလဲအလှယျ သုံးတတျအောငျ လလေ့ာသငျယူနိုငျပါတယျ။ ဝေါဟာရ ကွှယျဝစဖေို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးကတော့ အဓိပ်ပာယျဆကျစပျမှုကို ပွတဲ့ thesaurus ဝေါဟာရဘဏျ စာအုပျကို အသုံးပွုခွငျးဘဲ ဖွဈပါတယျ။ Thesaurus မှာ အဓိပ်ပာယျဆငျတူတဲ့ ဒါမှမဟုတျ အဓိပ်ပာယျ ဆကျစပျနတေဲ့ စကားလုံးတှကေို စာရငျးပွုလုပျဖျောပွထားတဲ့အတှကျ ရေးနတေဲ့ စာသားထဲမှာ စကားပရိယာယျ ကွှယျစဖေို့ သငျ့တျောရာ ဝေါဟာရအမြိုးမြိုးကို ရှေးခယျြပွီး ပွောငျးလဲအသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈတယျ။
Permalink Reply by 0ms7llyl75nrs on August 8, 2012 at 13:33
Permalink Reply by kyukyuhlaing on August 8, 2012 at 14:05
Permalink Reply by Chan Myace Kyaw on August 8, 2012 at 14:13
Permalink Reply by egglay on August 8, 2012 at 14:35
Permalink Reply by zarni on August 8, 2012 at 14:39
Permalink Reply by Thandar ko on August 8, 2012 at 14:50
Permalink Reply by Zaw Win on August 8, 2012 at 15:03
Permalink Reply by TheinSoe on August 8, 2012 at 15:07
Dear myanmar net,
Please share me everyday.
Permalink Reply by Ummay Ayman on August 8, 2012 at 21:09
We send mail shot to your e-mails whenever we post new articles or our members post them. Kee
Permalink Reply by Kyaw Soe on August 8, 2012 at 16:19
Permalink Reply by cho wint yee on August 8, 2012 at 17:16
Permalink Reply by NYUNT NYUNT KYI on August 8, 2012 at 17:46